Savate boxe française : Hampakatra ringa ireo «vedettes» ny ligin’Analamanga | NewsMada
Savate boxe française : Hampakatra ringa ireo «vedettes» ny ligin’Analamanga
Ho fanatanterahana ny fandaharanasany sy hamaranana ny taom-pilalaovana 2017, hikarakara «grand gala» ny ligin’Analamanga, eo amin’ny taranja savate boxe française. Fihaonana hotontosaina, ny alahady 10 desambra, ho avy izao, ao amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Hangotraka io fihaonana io, satria hampakatra ringa ireo rehetra nanana ny lazany fahiny sy ireo izay efa nitondra avo ny anaran’i Madagasikara teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, dia ireo izay efa tompondakan’i Afrika sy ny tompondaka eran-tany ary ny tompondakan’ny ranomasimbe Indianina ny ligin’Analamanga.
Ankoatra izay, hisy ny ady ho an’ireo «vedettes» sy ny an’ny «Pro». Tanjon’ny ligin’Analamanga, amin’ity fihaonana ity, ny hampakarana indray ny lanja sy ny lentan’ireo mpikatroka savate boxe française rehetra. Fanairana ihany koa ireo mpankafy sy ny mpikatroka, mba tsy hatoritory, satria haiady voafehy sady nampalaza ny Malagasy ny savate boxe française.
Hampiavaka ity “grand gala” ity ny seho hataon’ny taranja Kempo sy ny MMA ary ny Pancrace. Nasain’ny ligin’Analamanga manokana ihany koa ny avy amin’ny kick-boxing. Mampanantena ady mahafinaritra sy seho tsara, amin’ity ligin’Analamanga ity.